अंगीकृत नागरिकता | Ratopati
अङ्गीकृत नागरिकले वंशजको अधिकार खोसेकै हुन् त ? access_timeअसार ११, २०७७
काठमाडौं । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । योसँगै अहिले नागरिकताको विषयमा नयाँ बहस थालिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त्यसल...
विदेशी बुहारीलाई नागरिकता कहिले ? access_timeभदौ ११, २०७६
विदेशी बुहारीलाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने–नदिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद कायमै छ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आउने विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको अडान छ भने छिमेकी भारतको जस्तो ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा सत्ता...